INDAWO YOKUHLALA EFUDUMELEYO KWILALI - I-Airbnb
INDAWO YOKUHLALA EFUDUMELEYO KWILALI
Indawo yokuhlala yabucala embindini weSt-Mathieu-du-Parc, kufutshane nazo zonke iindawo ezintle zemvelo zengingqi yethu. Ixhotyiswe ngokupheleleyo, amagumbi anokuzola, ukuthi zava kunye nokuziva usekhaya. Imizuzu eyi-10 ukusuka kwi-Mauricie National Park, i-Parc Récréo, i-Mont Mont Mont, i-Niver des Lacs (ibhayisekile), i-St-Elie, i-Shawinigan... I-Café Bistro ikwindawo efanayo. Indawo efanelekileyo yokuhlala uze ube nexesha elimnandi elingasoze lilibaleke eMauritania. Sikhangele phambili ekukwamkeleni!
Indlu yeCITQ # 272296
Iflethi okanye indlu ekwicomplex ekwicomplex esemaphandleni embindini welali. Amagumbi okulala ayi-2, ikhitshi elipheleleyo, igumbi lokufunda kunye neloft/igumbi lokuhlala eliqaqambileyo eline-hammock nendawo yokubasa umlilo eyenziwe ngeenkuni, indlu yangasese epheleleyo.
Kukho iivenkile zokutyela eziyi-2 kwisayithi yakho kwaye ukufutshane nezinto zendalo ezithandwayo kule ndawo.
Inombolo yomthetho: 272296